Dhammasa hatataama Haala yeroo Ammaa Naannoo Oromiyaa Keessaattii jirtu irraa hakamittii jira? maal – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosDhammasa hatataama Haala yeroo Ammaa Naannoo Oromiyaa Keessaattii jirtu irraa hakamittii jira? maal
#Qabsoon Bu’aa Bahii Hedduu Qabdi! Qabsoo keesatti didhaalee heddutuu si mudata, Qabsaawota kees bifa gara garaan of biraa dhabada!
#Tokko du’aan dhabda, Rabbiin isaaniif haa araaramu, Seenaan isaan Haayaadatu.
#Tokko Jiruun Dhabda isaaniifis Waaqni haa araaramu, Seeraa fi Seenaan isaan haa gaafatu.
#Tokko ammoo diinatuu ejjannoo siyaasaa isaanif sirraa addaan baasa, #FreeAllPoliticalPrisonersinEthiopia
Salphina Abiyoot dhageefadhaa salphataanakkana . nuti waan saalfannu hinqabnu!
#Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) n Paartiilee Siyaasaa Wajjiin Dhimma Filannoon Duraa, Yeroo Filannoo fi Filannoon Boodaa Irratti Marii Taasise.
#Addi_Bilisummaa_Oromoo(ABO)n Haa Jiraatu!